Kanzuru yeGweru neVagari Vopesana Pamusoro peMamita eMvura
Vagari vanoti kuwana mvura yakachena ikodzero yavo iri mubumbiro remitemo
Pari kuita kusawirirana pakati pekanzuru yeguta reGweru nevamwe vagari pamusoro pehurongwa hwekanzuru iyi hwekuda kuti vagari vashandise ma-prepaid metre emvura.
Vamwe vagari vakaudza Studio 7 kuti havawirirane nehurongwa uhu nekuti kuwana mvura yakachena ikodzero yevagari isingafanirwe kutyorwa zvisinei kuti vagari vanombotadza kubhadhara mitero yemvura.
Mumwe mugari uyo akangozvidoma nezita rekuti Ambuya Kurebwaseka vakati kuve nema-prepaid metre emvura kunogona kuunza zvirwere sezvo vamwe vanhu vachigona kutadza kuwana mari inenge ichidiwa kuti vakwanise kutenga mvura nguva nenguva.
Mumwewo mugari, Amai Nonhlanhla Chijiya vanotiwo havatsigire nyaya yema-prepaid metre vachiti mvura yakasiyana nemagetsi ekuti vanhu vakaashaya vanokwanisa kushandisa dzimwe mhando dzemoto.
Amai Chijiya vanotiwo kanzuru inofanirwa kuziva kuti veruzhinji vari kuomerwa nehupenyu vachitiwo vagari vakawanda vanoda kubhadhara zvikwereti zvavainazvo kukanzuru kunyanya zvemvura, asi vanoti kanzuru inovawomesera nekusada kutambira mari inobhadharwa muzvidimbu-zvidimbu.
Kunze kwekusawirirana nenyaya yema-prepaid metre emvura mumwewo mugari VaTicharwa Ngambura vanoti vanoti vagari vanochema-chema nehwavanoti huwori hunoitwa nevamwe vashandi vekanzuru vavanoti vanovharira vagari mvura zvisiri pamutemo vachida mari yechiokomuhomwe.
VaCharles Mazorodze vanove mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reGweru Residents Forum vanoti zvakanakira vagari kuti vashandise ma-prepaid metres vachitiwo zvimwe zvikwereti zvemvura zvinonzi vagari vanazvo kukanzuru hazvizi zvechokwadi nekuti vashandi vekanzuru havatarise nemazvo mashandisirwo anoitwa mvura nevagari.
Asi meya weGweru VaCharles Chikozho vakaudza Studio 7 kuti hurongwa hwekuti vagari vashandise ma-prepaid metres huri kuenderera mberi vachitiwo vagari vakatambira hurongwa uhu, kunyange hazvo vakati havakwanise kupa nguva chaiyo yekuti izvi zvichaitwa riinhi.
Panyaya yehuwori hunopomerwa vamwe vashandi vekanzuru vachinzi vanovharira vamwe vagari mvura vachida mari yechiokomuhomwe, VaChikozho vakakururudzira vagari kuti vasaite zvekuda kubhadhara mari yakadaro sezvo izvi zvisiri pamutemo uyewo zvisingabatsire vagari pakuderedza zvikwereti zvavanenge vainazvo kukanzuru.
VaChikozho vakati vagari vane chikwereti chakakura kukanzuru vachitiwo kanzuru yavo yakazvipira kutaurirana nevagari vanenge vane zvikwereti kuti vabhadhara sei zvikwereti izvi.
Vakatiwo kunyange hazvo vachitambira pfungwa yekuti kuwana mvura yakachena ikozdero yevagari, vanhu vanofanirwa kuyeuka kuti kanzuru inoshandisa mari yakawanda kuti vanhu vawane mvura iyi.
VeZimbabwe National Water Authority vari kukurudzira kushandiswa kwema-prepaid water metre vachiti munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiti izvi zvinobatsira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mvura yavanenge vashandisa chaiyo kwete kubhadharira inenge yaita zvekufungidzirwa.
Harare nderimwe remaguta ari munyika akatanga kukurudzira vagari kuti vashandise ma-prepaid metre emvura mune dzimwe nzvimbo muguta iri.
Asi vamwe vanoti kushandiswa kwema-prepaid metre kunogona kuwomesera vanoshaya.